Myint Kyaw Thu's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (20)Discussions (1411)EventsGroups (29) Myint Kyaw Thu's Likes Myint Kyaw Thu's Friends
View All Myint Kyaw Thu's Groups
Debates & Complains
Command & Conquer Genera…
Myint Kyaw Thu's Discussions
To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker
Started this discussion. Last reply by infofreakz Apr 19. မြန်မာများ ရေးသားသော App များကို crack လုပ်နေသော Myanmar Mobile App Store
Started this discussion. Last reply by pyiphyomgmgsoe Jan 22. ဂိမျးရေးနညျး သငျတနျးဖှငျ့မညျ!
Started this discussion. Last reply by SoeThi Dec 10, 2011. View All
From Cho Wut Yee
ွGame Programming သင်တန်းဖွင့်မည်
KMD တွင် Mobile game development သင်တန်းဖွင့်မည်။ အချိန် ၃ လခွဲ။ December တွင်အတန်းသစ် စမည်။Game development အတွေ့အကြုံ ၇ နှစ်ရှိ ဆရာကိုယ်တိုင် (ကျွန်တော်ဖြစ်ပါသည် :P) သင်ကြားပေးမည်။သင်တန်းပြီးလျှင် Mobile game development certificate ရရှိမည်။ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား game company များတွင် အလုပ်ဝင်လုပ်နိုင်မည်။ ကိုယ်တိုင် iPhone game များရေးသား၍ Apple Store တွင်ရောင်းနိုင်မည်။အသေးစိတ် သိလိုလျှင် PM ပို့၍မေးမြန်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် KMD Training Center တွင် လူကိုယ်တိုင် စုံစမ်းနိုင်သည်။ Profile Information
Managing Director, Chief Software Archetect
MCSA (Myanmar Computer Scientist Association)
misaki liked Myint Kyaw Thu's blog post Making of Santa Talking Part-1Sep 8infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker"ငါ့ဘကျကတော့ ရှငျးစရာရှိတာ ရှငျးပွီးသှားပွီအခုကစပွီး ဘာမှ ပွနျပွောတော့မှာမဟုတျဘူးအခြိနျကုနျတယျ"Apr 19infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker"မငျးက လနေဲ့ဝမျးတောငျ ကှဲပွားအောငျ နားလညျနိုငျစှမျးမရှိတဲ့လူပဲ။ ငါရေးထားတာက vulnerability ကိုရှာတယျလို့ရေးထားတာ။ ကူလီကူမာတှေ လြှော့ပါကှာ။ မငျးမလညျး အဲဒီလို အာခြောငျတာတှကွေောငျ့ လူမုနျးမြားလှပွီ။"Apr 19Myint Kyaw Thu replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker"ဒါ​ပေါ့။​ ခငျ​ဗြား​ လိမျ​မ​လိမျ၊​ ဖောကျ​မ​ဖောကျ​က​တော့​ ကိုယျ​တိုငျ​ အ​သိ​ဆုံး​ဖွဈ​မှာ​ပါ။​ ခငျ​ဗြား​တို့​ကွောငျ့​ hacker တှေ​ သိက်ခာ​ကြ​တယျ။​ ပတျ​ရမျး​တာ​လဲ​ မ​ဟုတျ​ဘူး။​ ခငျ​ဗြား​ post ထဲ​မှာ​ V3SS နဲ့​ အ​ပေါငျး​အ​ပါ​တ​စု​ ဖောကျ​တယျ​လို့​…"Apr 19infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker"အဲဒါကတော့ မငျးသမိုငျးပဲတဈခုတော့ရှိတယျ မကျြနှာမော့ပွီး တံတှေးထှေးနသေ၍ကတော့ အဲဒီတံတှေးဟာ မငျးမကျြနှာပျေါပဲ ပွနျကနြဦေးမှာပဲပုံမှနျအတိုငျးဆိုရငျ မငျးနဲ့ အဖကျလုပျပွီး ရနျမဖွဈခငျြလို့ မငျးကိုတောငျ block လုပျထားတာဒီနမှေ့ ဒီ post မှာ…"Apr 19Myint Kyaw Thu replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker"ပွောငျ​လိမျ​ :S တျော​ပွီ​ လိမျ​တဲ့​သူ​နဲ့​ ဆကျ​ပွီး​ အ​ငွငျး​မ​ပှား​ခငျြ​တော့​ဘူး​။ သူ​လဲ​ လိမျ​ရ​လှနျး​လို့​ အ​ကု​သိုလျ​မြား​တယျ။​ :S"Apr 19infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker"ငါရေးထားတဲ့ note မှာ screenshot ကအစ အပွညျ့အစုံပါတယျနောကျပွီး ငါပွောထားပွီးသား vulnerability ကိုရှာတာပဲရှိတယျ ဘာမှ exploit မလုပျခဲ့ဘူး အဲဒီ information ကိုလညျး leak မလုပျခဲ့ဘူးဘူးမငျးဘာသာမငျး ဖောကျခံထိတာကတော့ ငါတို့နဲ့မဆိုငျဘူးမငျးသာ ရိုးသားဖို့လိုတယျ"Apr 19Myint Kyaw Thu replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker"Site ဖောကျ​ပွီး​ အ​ဖကျြ​ခံ​ရ​တာ​ MITPro က​ လူ​တျော​တျော​မြား​မြား​ သိ​တယျ။​ ခု​မှ​ လာ​လိမျ​မ​နေ​နဲ့။​ အ​ခွား​ဘယျ​သူ​မှ​လဲ​ မ​ဖောကျ​ဘူး။​ ကြှနျ​တျော​ကိုယျ​တိုငျ​ ဘယျ​သူ​ ဖောကျ​မှနျး​ကို​မ​သိ​ဘူး။​ ခငျ​ဗြား​ဘဲ​ ဖောကျ​တယျ​လို့​ FB မှာ​ပွော​လို့​…"Apr 19infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker""အဲ​လို​ မ​ပွော​စေ​ခငျြ​ရငျ​ သူ​မြား​ site ကို​မ​ဖောကျ​နဲ့​ပေါ့​ဗြာ။​ ဒါ​သူ​မြား​ စီး​ပှား​ရေး​ လုပျ​နေ​တာ​ပါ။​ အ​ပြျော​တငျ​ထား​တာ​လဲ​ မ​ဟုတျ​ဘူး။​ online မှာ​ငွငျး​လို့​ ရှုံး​တာ​နဲ့​ အဲ​လို​ အောကျ​တနျး​ကြ​ကြ​ သူ​မြား​ site ကို​ ဖောကျ​စ​ရာ​…"Apr 19Myint Kyaw Thu replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker"photo editing က​ စာ​အုပျ​ထုတျ​တဲ့​သူ​လုပျ​တာ။​ ဘယျ​စာ​ရေး​ဆ​ရာ​က​ လုပျ​လို့​တုနျး။​ ဗ​ဟု​သု​တ​နှယျ​ ကွှယျ​ဝ​ပါ့။​ :S ကြုပျ​ဆီ​မှာ​ ခိုး​ထား​တာ​ မ​ရှိ​ရငျ​ ခငျ​ဗြား​ ဒူး​ထောကျ​ တောငျး​ပနျ​မ​လား​?"Apr 19Myint Kyaw Thu replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker"photo editing က​ စာ​အုပျ​ထုတျ​တဲ့​သူ​လုပျ​တာ။​ ဘယျ​စာ​ရေး​ဆ​ရာ​က​ လုပျ​လို့​တုနျး။​ ဗ​ဟု​သု​တ​နှယျ​ ကွှယျ​ဝ​ပါ့။​ :S ကြုပျ​ဆီ​မှာ​ ခိုး​ထား​တာ​ ရှိ​ရငျ​ ခငျ​ဗြား​ ဒူး​ထောကျ​ တောငျး​ပနျ​မ​လား​?"Apr 19infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ် ထမိန်ရုတ် hacker"မရှကျတာက မငျးကှမငျးမိနျးမကို ငါက ဘာလုပျနလေို့လဲမငျးဘာသာ သူတျောကောငျးယောငျဆောငျပွီး ဟိတျတဈလုံးဟနျတဈလုံးနဲ့ပွောနလေို့ မငျးမိနျးမစာအုပျထှကျတော့ အဲဒီစာအုပျမှာ photo editing & layout editing အတှကျသုံးတဲ့ software တှကေ licensed လား pirate…"Apr 19 More... RSS
At 12:23am on August 5, 2012, PuTuTuLay said… ဆရာ ... Game သင်တန်းဖွင့်သေးဝူလား တက်ချင်တာ မနေနုိုင်တော့ဝူး :D
ဟီးဟီး At 11:29pm on February 6, 2011, Wayne said… Hi this is billonare Wayne . Let's rule media bro. Let's go kick some asses.
:D At 8:02pm on September 22, 2010, Wayne said… Free-Time:
- Bleach၊ Naruto၊ Clannad ကြည့်နေသည်။
yosh! what about Full Metal Alchemist , biased!!! At 3:28pm on September 20, 2010, Wayne said… ဘယ်မလဲ wallpaper
:D At 12:50pm on May 24, 2010, Wayne said… ကိုနိုဗားမာရီယိုမြင့် mmgamers အတွက် calender background လေးလုပ်ပေးနော်နော်
၂.၅' x ၂'
သားသားတို. publish နဲ့ calender လုပ်တာတာဝန်ယူလိုက်မယ်
ဦးနော်နော်နော် နော်လို. :D
p.s မလုပ်ပေး မှာစိုးလို. MITP တွင်တင်လိုက်သည်
ဟီးဟီး At 5:06pm on May 16, 2010, SoeThi said… ဟင်းချက်နည်းများ လေ့လာနေသည် < ဆိုတော့ကာ မဒမ် စိတ်ကောက်နေပြီထင်ပါ့ :D J/K At 1:00am on May 13, 2010, Wayne said… Ko Nova
Gears of War2ဆော့နေတယ်ဆို
ကိုပီက ရှိက joystick မလာခဲ့မယ်
:D At 2:52pm on April 16, 2010, Wayne said… MCSA (Myanmar Computer Scientist Association)
:D At 6:21pm on April 5, 2010, Wayne said… CNC4ရပီဘို
let's At 5:56pm on April 5, 2010, Thet Naing Swe said… really nice to see all the Myanmar Game Programmer No comments yet!
Myint Kyaw Thu's Blog
Posted on December 26, 2012 at 1:00am0Comments
ဒီဆောင်းပါးမှာ Total Gameplay Studio မှထုတ်လုပ်တဲ့ Santa Talking ဆိုတဲ့ mobile app လေးကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို တည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ Santa Talking ဆိုတာ Talking Tom လို graphic နဲ့ animation အသားပေး entertainment app တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app လေးကို ကစားတဲ့ နည်းကတော့ touch screen ရဲ့ hotspot နေရာတွေကို ထိတွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် Santa ကတုန့်ပြန်တဲ့ animation လေးတွေ ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း Santa က AI သုံးပြီး စကားပြန်ပြောမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Joke ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကို… Continue End User မြားအတှကျ Myanmar Unicode
Posted on January 26, 2011 at 4:13pm5Comments
ယခုနှဈဆနျးပိုငျးမှစ၍ Myanmar Unicode သို့တျောတျောမြားမြား ပွောငျးသုံးကုနျပွီ ဖွဈသညျ။ တခြို့လဲ ပွောငျးပွီး မသုံးဖွဈကွသေးပါ။ အဓိက အခကျအခဲမှာ font download လုပျရတဲ့ အခကျအခဲ မဟုတျပါ။ Font တှကေ free download လုပျလို့ရသလို၊ download လုပျဖို့ file size ကသေးတယျဆိုတော့ connection မကောငျးရငျတောငျ ၁ မိနဈအတှငျး download ဆှဲလို့ရသညျ။ ပွီးတော့ တခါတညျးတနျးပွီး install လုပျ၊ browser မှာတနျးပျေါတော့ အလှနျအဆငျပွသေညျ (Browser တောငျ restart ခဖြို့မလို)။ အဓိက ပွသနာမှာ Myanmar Unicode Phobia ရောဂါဖွဈသညျ။ ZawGyi… Continue How to Recruit In Burma
Posted on July 8, 2010 at 12:05pm9Comments
People are saying they can't findadecent job in Myanmar. People are also saying they can't recruitadecent developer in Myanmar. Well, the former are job-seeking potential employees and the latter are job offering employers and start-up entrepreneurs. So what's wrong in there? A lot of people are seeking jobs andalot of people are offering jobs but both sides can't find one. This discussion is for job offering employers. For job seekers check out Ko Ei Maung's article in this month… Continue "သားသားကြီးလာရင် Game Developer လုပ်မယ်"
Posted on February 17, 2010 at 12:46pm 33 Comments
ငယ်ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေက ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မှာလဲလို့ မေးတတ်တယ်။ အများစုက ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ်၊ အင်ဂျင်နီရာကြီးလုပ်မယ်။ စသည်ဖြင့်ဖြေကြတာပေါ့။ အဲဒါကို သားသားကြီးလာရင် game တွေလုပ်မယ်လို့ ဖြေမိရင် အရိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ခု game ဆော့တာတောင် အားမရသေးဘူးလို့ အပြစ်တင်ခံရနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ သင်ဟာ IT ကိုလဲ စိတ်ဝင်စားမယ်၊ games တွေကိုလဲအရူးအမူးကစားမယ်၊ အားတဲ့အချိန်မှာလဲ game အိုင်ဒီရာ အသစ်တွေအမြဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာ game developer ဖြစ်ဖို့ ပါရမီပါတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ တကယ်လဲ game developer… Continue Making Money with Flash Games
Posted on January 10, 2010 at 12:32pm7Comments
ကျွန်တော်တို့ Flash games တွေရေးပြီးရင် Flash games တွေကနေဘယ်လိုပိုက်ဆံပြန်ရှာ မလဲ၊ ဘယ်လို commercial သွားနိုင်သလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။ Flash games တွေဟာအများအားဖြင့်၊ ပိုက်ဆံနဲ့မဟုတ်ဘဲ free ပေးဆော့တာများတာ သတိထားမိမှာပါ။ Free ပေးတဲ့ Flash market ထဲမှာကိုယ့် game ကိုပိုက်ဆံပေးမှဆော့ရမယ်ဆို၊ သိပ်အောင်မြင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ free games ကနေဘဲ ပိုက်ဆံရှာဖို့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ နောက်ပြီး၊ game ကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းတာထက်တောင် ပိုပြီးဝင်ငွေဖြောင့်နိုင်ပါသေးတယ်။ Flash မှာ… Continue AddaBlog Post
View All Welcome toMyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals